Ma ii sheegi kartaa sida loo dhiso dib u qabsiyo 2016 marka la eego Web 2. 0 Xiriirinta dhaqamada?
Ka hor intaa wax kale, aan aragno - Web 2. 0 Xiriirinta ficillada ayaa wali shaqaynaya! Sidaas darteed, haddii aad rabto inaad ogaato sida loo dhiso dib u qabsiyo 2016, adigoo ka faa'iideysanaya faa'iidada saxda ah ee Webka 2aad. 0 Xiriirinta ficillada, aynu eegno hage kooban oo hoose. Hadafkayagu waa inaan sare u qaadno qiimeynta boggaga internetka ama boggaaga - iyada oo aan waxyeello u geysan khibradda userka ee dadka raadinaya kuwa nool. Dabcan, waxaad dooneysaa inaad wax walba ka hesho si looga hortago in lagugu tuhunsan yahay inaad isticmaashid xeelado aan la aqbali karin. Habkaa, waxaad u maleyn kartaa inaad ku xadgudubto jihooyinka webmaster ee muhiimka ah isla markaana halkan ku kasbado ganaax aad u daran. Taasi waa sababta aan u socdo si aan kuu tuso sida loo dhiso dib u qaabeyn ah sannadka 2016 sida ugu habboon uguna badbaado, ma aha in la garaaco Google.
Maskaxda ku hay, si kastaba ha ahaatee, in laga faa'iidaysto dhismaha Web 2. 0 backlinks waa inaad ku dhex socotaa istaraatiijiyada guud ahaan guud ahaan SEO. Taasi waxay u baahan doontaa inaad ku maal gasho wakhti iyo dadaal badan oo abuuraya xiriiryo shaqo oo caddaalad ah oo bixin kara qiimaha dhabta ah ee booqdayaashaada bogga. Haddii kale, boggaaga ayaa kor u qaadi doona calaamad casaan leh Google, oo had iyo jeer ku dhamaato rigoore roon - ugu dhakhsaha badan ama ka dib. Taasina waa inaad marwalba ka taxadartaa kuwa ka faa'iideysanaya boggaga ballaadhan ee ballan-qaadka ah ee lagu iibiyo baakadaha kala duwan, ama xitaa qadar badan oo ah lacagta HQ-ka ah - oo leh hadalkooda malabiga ah ee sheeganaya inay dhabarkooda dhabarkooda ka yihiin kaliya shabakadaha internetka iyo kan ugu sareeya PR iyo blogs.
Waa kelmado qumman oo keliya ee digniintaada kuugu jirta si aad u qaadatid - si degdeg ah u dhaqaajiso micnaheedu waa inaadan kalifin lacagta lacagtu ku adagtahay, laakiin wax walba si adag u saadaaliya oo aad u badan tahay in ay sameyso waxyeello marka loo eego wanaag. Haddaba, aan dib ugu laabanno barta - abuurista Web 2. 0 links kuwaas oo dhab ahaantii awood u leh inay bixiyaan natiijada ugu sareysa ee natiijooyinka ugu fiican ee SEO. Hoos waxaa ku qoran liiska dhibcaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay si aad u fahamtid sida loo dhiso dib u qabsiyo 2016 - sida saxda ah.
Abuurista Boggaga Interneetka
Samee aasaaska saxda ah ee joogitaanka bulsho ee firfircoon ee mudada dheer socota ee shabakadda ganacsiga ama blogga. Talaabada koowaad ee halkan waa inaad buuxisid boggagaaga bogga 2aad. 0 goobo bulsheed oo la xariira nuujintaada ama mawduuca guud. Sidaa darteed, waxaan isku dayi doonaa sida loo dhiso dib u qabsiyo 2016-ka bilawga bilawga - aynu ku bilowno buuxinta xogtaada goobaha soo socda:
buuxi boggaaga gaarka ah ee Google My Business;
abuur boggaaga Yelp;
dhamaystiran xisaabaad bulshadeed oo ku saabsan Twitter, Facebook, LinkedIn;
sii wad si aad u buuxiso xaqiijinta bogga xiriirinta bogga;
booqanaya Goobta (waa inay sameeyaan haddii aad wax ka qabato B2B, ama ganacsigaagu wuxuu leeyahay qayb ka mid ah lebbiska-iyo-hoobiye).
Aqoonsiga Magaca Taariiqda
Marka dhammaan boggaga xisaabaadka bulshada iyo boggaga muuqaalka ah, waa waqtigii lagu darayo isku xirka boggaaga weyn mid kasta. Sidaa samee, ha ilaawin inaad isku xirto xiriiriyeyaasha cusub ee la abuuray qoraalka muhiimka ah ee muhiimka ah. Tilmaam: adigoo haysta booga maqalka ah ama bogag taageera oo wanaagsan oo leh Su'aalo & Jawaabo (sida Quora). Taasina waa sida jahannamada!
Abuurista Bogagga Bulshada
Ugu dambeyntii, dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad gabi ahaanba xakameyso aduunka SEO, iyo si fiican u shaqeyn kartid tayo tayo leh oo bixisa qiimaha dadka isticmaala. Si aad waxkasta u aragto dabiiciga ah, waa in aad xoogga saartaa kuwan soo socda:
soo gudbinta waxyaabaha xiisaha leh ee mararka qaarkood lala xiriiriyo;
dhismo aan ka badnayn shan isku-xidh toddobaadkii;
daabacan posts boostada on blogs Tumblr, bogagga taageeraha on Facebook, blogs WordPress, xisaab on Instagram, iyo channel video on YouTube Source .